Sina: Iza No Nahalala Fa Nankahala An’i Gaddafi Ny Libiana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Oktobra 2011 6:09 GMT
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny fanadihadiana nataonay manokana momba ny Fikomiana any Libya 2011.
Zhang Zhaozhong dia toy ny Thomas Friedman Sinoa: Profesora fanta-daza iray miaraka amin'ny PLA National Defense University, Contre-Amiral ao amin'ny tafika an-dranomasina PLA ary mpanao tatitra momban'ny raharaha ara-miaramila ho an'ny CCTV sy ny haino aman-jery hafa, manana mpankafy marobe ary malaza amin'ny fandaminana ny fifanolanana eo anivon'ny miaramila izay iadidiany mialoha ny tsy hitrangan'ny voka-dratsiny.
Rehefa nanani-bohitra tany Iraka ny Amerikana tamin'ny fiandohan'ny taona 2003, dia nanao fanambarana miezinezina tamin'ny alalan'ny haino aman-jery i Zhang fa ho voatàna ao anaty ady mitarazoka ny tafik'ireo mpanani-bohitra ireo mandritry ny taona maro. Tao anaty fanadihadiana iray tao amin'ny CCTV, dia niteny i Zhang fa nanana ny fianakavian'i Hussein ny vahoaka Irakiana hanohana azy tao an-damosiny, ary ny tafiky ny firenena dia tena ampy fitaovana tsara mba hanoherana ireo firenena efatra izay nandray anjara tamin'izany fidirana an-keriny izany; rava i Baghdad ny andro manaraka ary nirehitra teny an-dàlana daholo ireo sarin'i Saddam Hussein.
Miaraka amin'ny fikomiana misy tao Libya, dia nisy atao hoe “sakaizan'ny vahoaka Sinoa” iray, izay mbola tena mibahan-toerana ao amin'ny fampahalalàm-baovao Sinoa ( rohin-dresaka iray ao amin'ny BBS manaraka akaiky ny toe-draharaham-pirenena dia nahangona tsikera miisa 5,000 pejy mahery hatramin'ny nitsanganany ny volana May lasa teo) i Zhang, ihany koa, dia lasa niverina hita indray tamin'ity volana ity taorian'ny fanadihadiana natao taminy ny fiantombohan'ny volana Aogositra, izay mbola tao amin'ny CCTV ihany. Tamin'ity dia manontany tena ireo mpampiasa aterineto hoe nahoana ny olona ambony toerana toy itony no mety hanao hadisoana goavana. Ny valiny: manao ny asany fotsiny izy.
Efa nifikitra teo i Gaddafi nandritry ny dimy volana, ka tsy mino aho hoe hiteraka olana ho azy ny hijanona eo hatramin'ny taona manaraka.
Na, toa an'i Xin Haiguang, mpamoaka lahatsoratra aminà haino aman-jery samihafa, nandefa azy ity tao amin'ny Weibo [zh]:
Ilay miaramila mpanao kajikajy fanta-daza ary contre-amiral, Zhang Zhaozhong, dia mbola miresaka ao amin'ny fahitalavitra, kanefa i Gaddafi efa niongana – toa niverena indray ny nandritran'ny ady tany Iraka…tsy dia tena zavatra manahirana loatra raha misy olona diso tombatombana, kanefa kosa i Zhang dia miavaka. Marina fa tsy maro ny miaramila Sinoa manam-pahaizana fakàn-kevitra mitovy fahaiza-manao aminy, kanefa raha amin'ny haavo lentan'ny fahaiza-manaon'i Zhang, raha toa izy ka tokony hanana toerana goavana ara-politika, dia tsy ho azo atao tsinontsinona ny fiantraikay ratsy ho an'ny firenena.
Ny hevitry ny mpamaky:
- Natao hampisavorovoro ny fahavalo fotsiny ny fisiany, ary hita fa nahomby tokoa izy tamin'izany..
- Hah, tadidiko tamin'ny 2003 rehefa niteny izy fa tsy olana raha nahazo an'i Baghdad ny Amerikana, fa afaka ny hanohitra tsara ny ady eny an-dàlam-be ny miaramila Irakiana, mandritra ny fotoana maharitraritra. Iza no nahalala fa hirodana ny ampitso ihany ny governemanta ary hataon'ny vahoaka ho toy ny tsinontsinona ny fananan'ny governemanta. Afaka mihaino izay lazain'ity bandy ity ianao, kanefa tsy afaka ny hiteny aho raha toa ka tsy mahavita azy lery na raha toa ihany koa izy ka manara-drenirano fotsiny.
- Ny mpanolo-tsaina politikan'ny Antoko dia tsy manana alàlana hiseho amin'ny fahitalavitra.
- Izay henonao sy izay famakafakana omeny an'ireo mpiandraikitra politika, dia zavatra tsy mitovy mihitsy.
- Toy ny endrika miaramilan'i Wang Yongping izy: tsy vendrana izy akory, fa mody vendrana fotsiny mba hivelomana.
- Okay, noho izany ity amiraly zokiny ity dia niseho an-taonany maro tamin'ny fahitalavitra mandrak'ankehitriny, misy te-hamantatra ve hoe mandra-pahoviana no hahavitàny mifikitra eo?
- Tsy mino aho hoe ho olana ho an'ny contre-amiral Zhang ny fijanonany eo hatramin'ny taona manaraka.
Kely dia kely ny fiheverana fa ho tafatsofoka ny renivohitra mialohan’ny fahataperan'ny Ramadany ireo Libyana mpihoko, ary tsy fantatrao mihitsy, fa i Gaddafi dia mety hahavita handavo an'i Sarkozy sy Obama.
Namerina niantso an'i Zhang indray ny CCTV taty aoriana mba hahazoana ny valinteniny momba ny tsikera miely be momba ilay fahadisoam-pijeriny mahakasika ny toe-draharaha ao Libya, ka izao no ampahany avy amin'izay nolazainy:
Ny zavatra fantatro rehetra dia manambara amiko fa ny antony nahatonga ny tombana nataoko ho tsy nandeha tamin'ny laoniny dia: nofitahin'ny vahoaka Libyana aho. Ankehitriny raha itodihana ny lasa, dia hita fa resin'ny vahoaka Libyana aho – raha atao amin'ny fiteny hafa dia hita fa artista mpilalao an-tsehatra mihitsy ny vahoaka Libyana. Ny ao am-pon'izy ireo, dia mankahala tanteraka an'i Gaddafi ary maniry mafy ny hahafaty azy, kanefa ihany koa dia nandroso teo anoloan'ny camera izy ireo, tampoka teo anefa, dia izy ireo indray no lasa mpanohana azy mahafatra-po. Tsy afaka ny hifaninana aminà hetsika toy izany aho, ka tonga lesona ho ahy izany.
Tsy nahita mpihaino tsara fandray ny tao amin'ny Weibo i Zhang [zh], saika tsikera naneso azy avokoa no hita tao :
- Tsy mahazo ny fo sy ny sain'ny vahoaka ny mpanao didy jadona, fa seho an-tsehatra fotsiny izany rehetra izany.
- Raha nandeha tany Korea Avaratra izy, dia ho norabirabian'ny vahoaka Koreana Tavaratra ihany koa ve? Indray mandeha aho nahita lahatsary tanaty aterineto ahitàna ny vahoaka Koreana Tavaratra niresaka momba ny Jeneraly Lehibe Kim, ary dia latsa-dranomaso mihitsy izy ireo!
- Ankehitriny aho dia manontany tena hoe mety hanao ahoana ny ho filalaon'ny vahoaka Sinoa.
- Soso-kevitra ny ahy ny mba hanolorana ny namana Zhang Zhaozhong ny anaran'ny Actor of the People na “ny Mpilalao an-tsehatra lanim-Bahoaka!”
- Hah, mba tiany ho hita ve hoe manao ahoana tsara ny fahafahan'ny vahoaka Sinoa milalao an-tsehatra?
- Omeo Oscar io bandy io!
- Raha ny momban'ny fahaiza-milalaon'ny vahoaka Libyana no jerena, dia hita fa tsy mionona fotsiny amin'ny fampisehoana izy ireo rehefa eo imasonao. Hitanay ihany koa izany. Nahoana izay hitan'ny tsirairay mazava tsara no toa sarotra ho an'ireo jeneraly ao amin'ny tafika kosa ny manakatra azy? Satria ve noho izy ireo mijolotra fanamiana?
- Itodian'ny nataony koa indraindray ireo jeneraly ao amin'ny tafika! Kanefa mety tsy hiresaka momba ny tsy fahombiazany ny Contre-Amiral Zhang, satria izy ihany koa no endrika isehoan'ny toerana ofisialy raisin'ireo manampahefana sy ny tafika Sinoa. Ka na ahoana na ahoana dia tsy ho avelan'izy ireo hiteny izay tiany ho lazaina amin'ny fahitalavitra izy, sa tsy izany?
- Toy izany ny toetran'ireo antsoina hoe manam-pahaizana amin'izao fotoana ao Sina, tsy misy na dia teny iray milaza fahamarinana mivoaka ny vavany. Eny fa na dia ny zanakay mianatra eny amin'ny Lisea aza ankehitriny dia mahafantatra fa vita hatreo ny amin'i Gaddafi ilay mpanao didy jadona sy tia kolikoly. Vendrana Ity manam-pahaizana ity.
- Mety ho i Sina angamba no tiany ho lazaina raha ny marina ?
- Tokony hino ve izahay fa ny vahoaka Tandrefana dia tena diso hevitra momba ilay toe-draharaha? Fotoana izao tokony hanatsaharana ny fisaintsainana foana ny zavatra amin'ny zoro mifanohitra, na inona na inona ny fieritreretan'ny Tandrefana. Mendrika ireo mpanao didy jadona izay mahazo azy. Izay mety ho fitserana asehonay amin'ny mpanao didy jadona dia fanaovana tsindry hazolena ny fiainam-bahoaka efa potika. Ary ny filazàna fa hoe nandaingàna izy, dia mba hialàna andraikitra fotsiny amin'ireo vahoaka izay mihomehy azy ankehitriny.
- Toy izany ny vahoaka rehefa eo ambany ny fahefan'ny mpanao didy jadona. Tsy mihetsika izy, fa miezaka ny hanavotr'aina fotsiny! Toy ny fony teo ambanin'i Stalin sy teo ambanin'i Mao nandritry ny Revolisiona Ara-Kolotsaina. Tahaka izany ny tao Korea Avaratra-paty, toy ireny hoe mbola teo ambanin'i Saddam ireny, eny fa na dia ankehitriny aza eo ambanin'i Hu….
- Ny marina dia mpilalao hatsikana mahay lavitra noho ny Libyana ny Sinoa.
- Tsy ny fahaizantsika misehatra no hataony ho fototry ny fitsaràny, sa tsy izany?
- Aoka marina e, i Sina anie manana vahoaka an-davitrisany maro miandry fotsiny ny fotoana hanombohana ny fampisehoany ny hatsikany e..
- Efa nametra-pialana ve izy?
Eny anivon'ny resadresaka amin'izao fotoana ao amin'ny aterineto momba izay mety hanjo an'i Gaddafi ilay naman'i Sina sy ny ho avin'ny fifandraisan'ny firenena amin'i Libya, dia hita fa maro ireo nifantoka kokoa amin'ny mety ho vokatry ny ataon'ny mpitarika ny mpanohitra ao Libya, izay niteny tamin'ny herinandro fa ireo firenena izay mankatoa – izay tsy mbola anisan'izany aloha i Sina – ny fanjakana ao aminy dia hahazo fifanaraham-pitrandrahana solika ho valisoa ary tetikasa hafa mahakasika ny fanarenana ny firenena, na dia hanilihana an'i Sina aza izany. I Sina angamba no lasa mpandresy lehibe tao Irak taorian'i Saddam, kanefa hatreto aloha ny hany nataony dia toa nanome fanampiana iray noho ny maha-olombelona fotsiny ho an'ireo firenena mandray mpitsoa-ponenana Libyana.
Ao amin'ny bilaogin'ny Phoenix News, Kai Shengli, mpampianatra ny fifandraisana iraisam-pirenena sy lalàna, dia nanoratra tamin'ny herinandro lasa [zh] fa i Sina ankehitriny dia efa mahatsapa ny tenany fa mihitsoka eo anelanelanà vato misakana lehibe sy ny fanohanany ireo ankolafy tsy nahomby :
Ny lesona farany [azo notsoahina tamin'ny ady tao Libya] dia misy ifandraisany amin'i Sina. Raha jerena ny fepetran'ny fifaninanana teo amin'ireo tena matanjaka, dia hita fa i Sina no maty antoka indrindra tamin'izy rehetra ireo. Ny OTAN, izay notarihan'ny Frantsa, Amerika ary ny Britanika, dia nitondra ny fanafihana ny fitondran'i Gaddafi tamin'izany, ary vao haingana i Rosia no namadika palitao, ka nangataka ny fametraham-pialan'i Gaddafi sy nanaiky ny fampiharana sazy amin'io firenena io. I Sina irery no hany firenena matanjaka izay tsy mbola tena niteny fa hoe mijoro eo anilan'ireo mpandresy tao Libya. Raha ny antony mahatonga izany, ny fanazavana tokana dia ny hadisoana teo amin'ny tetikady stratejikany.
Ny zavatra iray mampatahotra azy dia ny mety hisian'ny vokany ratsy ao anatiny raha voaporofo tokoa fa nandray anjara tamin'ny fanohanana ny dingana ara-demokratika izy. Tsy hojerenetsika loatra izay antony any, kanefa na izany aza, dia nandresy tamin'ny adiny ny antoko mpanohitra tao Libya, dia hitan'izy ireo izao fa misy sandany tokony haloa amin'izany. Tsy tonga dia haka fepetra avy hatrany ny amin'i Sina ny fitondrana vaovao ao Libya, noho ny fahafantarany fa mbola mila ny fanampian'i Sina izy amin'ny fanarenana ara-toekarena ny firenena. Raha amin'ny sehatra ara-politika kosa anefa, dia azo heverina fa amin'ny fomba tsy mitovy mihitsy no hitondran'ity fitondrana vaovao ity ny firenena matanjaka isan'isany, ary hijaly i Sina noho ny nandraisany fepetra sy fanapahan-kevitra diso.
Izany no fampianarana fototra izay tokony horaisin'ireoe diplaomaty Sinoa avy amin'io. Tsy dia ohatra maningana loatra akory i Libya; nisy an'i Sodana ihany koa teo alohany ary mety mbola hisy firenen-kafa ihany koa amin'ny ho avy. Ny fanamby goavana atrehan'ny diplaomasia Sinoa fia ny fomba hialàny amin'ny foto-kevitra ara-politika anatiny izay efa lalim-pàka sy hametrahany paik'ady mitsinjo lavitra kokoa sy mitombina tsara, ary eo ihany koa ny fahaizana mamantatra mialoha ny tranga mety hiseho.